Liam Hemsworth anopindura kuna Miley Cyrus-Kaitlynn Carter kutsvoda mafoto - Nhau
Kuru Blog Style Macelebs Nhau
Zvinofungwa naLiam Hemsworth chaizvo nezve avo Miley Cyrus-Kaitlynn Carter vachitsvoda mafoto: Rondedzera
Vanhu vazhinji vakashamisika apo Miley Cyrus akatorwa mifananidzo achitsvoda Brody Jenner 's achangopfuura ex , Kaitlynn Carter, iyo vhiki yakatarwa iyo Miley's rep akasimbisa muchato mupfupi wemuimbi Liam Hemsworth yaive pamusoro .
Taylor Chikomo / FirimuMagic
Zvino panouya mushumo mutsva unoburitsa pachena kuti Liam, 29, akaita sei mushure mekuona iwo mapaparazzi mafoto, ayo airatidza Miley, 26, naKaitlynn, makumi matatu, vachiita uye vachimbundira panguva yekuzorora kwehotera iri muLake Como yeItari nehanzvadzi yaMiley Brandi Cyrus.
Maererano ne Peji Rechitanhatu , Dzimwe shamwari dzaLiam dziri kuti mutambi weAustralia 'akashungurudzika' kuona mafoto erudo rwake rwakareba achipisa uye achiremerwa naKaitlynn, shamwari yevaimbova vaviri vaviri pamwe newaimbova Brody, uyo anonzi mumwe wevanoshamwaridzana naLiam.
'[Liam] akarwadziwa uye akapofomadzwa neaya mapikicha,' shamwari yakaudza Peji Yechitanhatu. (Zvisinei, hukama hwepamoyo hwaMiley naKaitlynn 'chaive chisiri chakavanzika' kuna Brody , ndiani 'akanyatsonaka nazvo,' sosi yakaudza Peji Sitanhatu pakutanga kwevhiki.)
Chirevo ichi chinouya sevanhu vari mukati memativi ese ekuparadzanisa vanga vachitaura kunhepfenyuro dzakasiyana. Vamwe vari mumusasa waMiley vakaedza kupenda pop nyeredzi kunge bato rakakuvara nepo vamwe mumusasa weLiam vari kuomerera kuti ndiye akatadzirwa pakati pekurambana kwemusoro wenyaya.
Sources paTeam Liam akaudza Peji Yechitanhatu kuti musasa waMiley wanga uchishanda nesimba kuti, sekunyora kwenyaya yeNew York Post, 'penda Hemsworth sedambudziko.' Sekureva kwemumwe musosi akataura nePeji rechitanhatu, 'Ivo vachiri vakaroora uye vaidanana chaizvo. [Miley] haasati akura uye agara akadaro. '
Liam anonzwa 'kukuvara,' Peji Yechitanhatu inonyora, nemishumo shamwari dzinotaura nhema kuti dzinomupenda semurume ane dambudziko - senge anobva Vanhu magazini mune zvinyorwa zvinoti Liam haasi iye 'chill surfer dude' vazhinji vanomutenda kuti ari uye kuti 'achapenga' kuna Miley, uyo akaedza kudzikisira kupomhodza kwaanofungidzirwa kuti kwakaoma.
Matt Baron / REX / Shutterstock / Emma McIntyre / Getty Mifananidzo yeMTV
'Liam ndomumwe wevanhu vane moyo munyoro, vakapfava kunze uko. Iye ari kusango kana kudhakwa kana kuurayiwa zvinoseka, 'sosi iri padhuze neLiam yakanangana nePeji Rechitanhatu, ichiwedzera kuti inoti iyo' Nzara Yemitambo 'nyeredzi ine nyaya dzekumwa dzakakanganisa imba yake' 100 muzana chinokanganisa 'kubva pahunhu hwaMiley.
Vamiriri venyeredzi havana kutaura, asi Peji Rechitanhatu rakadzora chirevo charo nekotesheni kubva kune imwe nzvimbo padhuze naMiley uyo akapokana nemishumo yekuti muimbi akabiridzira murume wake. 'Miley anga asiri akatendeka, uye idzi nyaya dzese nezvekuti anga ari musango uye kubiridzira iboka renzombe - - -,' akadaro masosi. Vakaparadzana. Ari kutora mugwagwa wepamusoro. Wese munhu ari kuedza kuzviita. Vakanga vari vese kubvira anga aine makore 16. Zvakaoma. '
Chirikadzi yaBiggie Smalls Faith Evans anoroora zvakare
Kristen Stewart naStella Maxwell vanoparara pabonde pamwe chete muCanada
colton haynes uye jeff leatham
thad luckinbill kusiya y & r
chii chinonzi ellen degeneres birthday
bruce jenner achidzokera pakuva murume
Laura spencer achiri mangwanani akanaka america